Wasiirka kheyraadka Soomaaliya oo dalka Turkiga uga qeybgalaya shir looga hadlayo sidii looga hortagilahaa xaalufinta dhirta. – idalenews.com
Wasiirka kheyraadka Soomaaliya oo dalka Turkiga uga qeybgalaya shir looga hadlayo sidii looga hortagilahaa xaalufinta dhirta.
Wasiirka kheyraadka dalka ayaa maanta u amababaxay dalka Turkiga si uu uga qeybgalo kulan balaaran Oo looga hadlayo ka hortaga xaalufinta dhirta iyo nabaadguurka deegaanka.
Mudane C/ Risaaq Cumar Maxamed wasiirka kheyraadka dalka ee Xukuumadda Soomaaliya oo Warbahinta lahadlay kahor inta uusan ka anba bixin garoonka diyaaradaha Aadan Cade ee magaalada Muqdiho ayaa sheegay in wadanka Turkiga uu uga qeybgali doono shir looga hadlayo xaalufinta dhirta Iyo nabaad guurka iyo waliba sida looga hortagi karo falkaasi oo ka socda qeybo badan ood alkeena Kamid ah Waxaana shirkaasi ka qeybgaya lix iyo labaatan dowladood oo Soomaaliya ay kamid tahay Kaasoo socon Doona mudo afar cisho ah.
Sidoo kale shirkaan waxaa looga hadli doono sidii dhaqaale loogu uruurin lahaa wadamada ay kajirto Xaalufinta dhirta si dadka ku howlan loogu abuuro fursado shaqo oo ka bedelan howsha ay hadda ku Guda jiraan ee ah nabaad guurka dhulka.
Wasiirka kheyraadka dalka C/Risaaq Cumar Maxamed oo aan wax kaweydiinay waxyaabaha uu shirkaasi Ka filayo inay kasoo baxaan islamarkaana dan u ah Dalkeena ayaa sheeay in ka qeybgalkiisa ay muhiim u tahay soomaaliya ayna kala hadli doona dalalka shirka soo xaadira sidii Soomaaliya looga saacidi lahaa in Ay ka kaaftoonto dhoofinta dhuxusha oo ay xukuumaddu mamnuucday.
Kulankan ayaa ku soo beegmaya xili Soomaaliaya ay ka jiraan dhibaataayin ka dhashay jarista dhirta sida Nabaad guur iyo abaaro inkastoo dowlada Soomaaliya ay mamnuucday dhoofinta dhuxusha oo Arimahaani oo dhan sabab u ahaa.
Askari ka tirsan dowlada oo ku diley nin rayid ah magaalada Jowhar
Isusoobax Lagu taageerayo aqoonsigii Mareykanka ee Soomaaliya oo maanta Muqdisho lagu qabtay